Sideen u nadiifinnaa tuubada duridda naaftada?
Nadiifin la'aan-kala furfurid. Habkani wuxuu isticmaalaa cadaadiska nidaamka asalka ah ee mishiinka iyo shabakada wareegga si ay ugu beddelaan gubashada shidaalka ee nadiifinta si ay u nadiifiyaan kaydka kaarboon ee ku jira dhululubada, ka dibna isticmaal habka qiiqa si aad u soo saarto. Inkastoo habkani yahay si...
Marka matoorka naaftada la damiyo, waxaa jira gariirad ku jirta waalka solenoid-ka oo la mid ah koronto-dhaliye. Marka korontadu shido, xoogga birlabeedka ayaa soo baxaya si uu joogsiga dib ugu soo celiyo shidaalka. Marka korontada la damiyo, ma jiro xoog birlab ah. Waa saliid Kadib th...
Sida loo tijaabiyo nozzles kaligaa
Marka qodista qodista ay la kulmaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin bilaabista, gaabiska, iyo korodhka degdega ah ee isticmaalka shiidaalka, marar badan ayuu khabiirka dayactirka bilaabayaa kormeerka iyo nadiifinta dhuunta shidaalka lagu duro, taas oo sidoo kale sharraxaysa muhiimada ...
Oct.1st ilaa 7th waa Maalinta Qaranka ee Fasaxa.
fadlan hubi xogta heerka socodka afar irbad oo dhululubo ah. ku hagaaji iyaga oo isku mid ah.
by admin 21-08-21
Matoorka naaftada qiiqa madow ayaa leh sababo yar. Sida caadiga ah dhibaatooyinka soo noqnoqda, waxay leeyihiin sababo soo socda: 1. Dhibaatada nidaamka duridda shidaalka 2. Dhibaatada nidaamka gubashada 3. Dhibaatada habka qaadashada 4. Dhibaatada nidaamka qiiqa 5. Kuwa kale tusaale ahaan dhibaatada tayada naaftada, dhibaatada qaybaha iswaafaqaya Sida loo c...
Garaacdu waa muuqaal gubasho aan caadi ahayn.Wakhtigan, matoorku ma laha awood ku filan. Raac tallaabooyinka: Matoorka Heerkulka Sare ee Gubashada si fiican uma guban, daalku waa xannibaadda mishiinka isticmaalka saliidda tamarta yar ayaa ka weyn isbeddelka RPM ee si lama filaan ah Sababaha: Gubashada sare ee Gubashada guriga sidoo kale...
1. Hubi qalabkeeda wax soo saarka 2.baari kooxdeeda tignoolajiyada 3.si fiican u ogow sumcadeeda 4.fahamto dammaanadkeeda 4.tijaabi si tijaabo ah